cfu on News24
ARTICLES RELATING TO CFU
Zimbabwe’s remaining white commercial farmers who fear renewed land invasions, are negotiating directlywith the government or the possible new owners to protect their properties, says a report.
Rogue police, soldiers attack white farmers in Zim – reports
Zimbabwe’s Commercial Farmers Union has reportedly urged its members to be on high alert amid reports that a gang in police and military uniform is attacking white farmers in the Midlands and Masvingo provinces.
There is an upsurge in attempts to forcibly take over Zimbabwean properties still owned by whites 15 years after the launch of a land reform programme, a Zimbabwe farmer’s union says.
The Zimbabwean government will soon intensify its land grabs, targeting the country’s remaining white farmers and those with multiple farms, acting president Emmerson Mnangagwa has reportedly said.
A Zimbabwean farmers union has reportedly called on the government to protect local farmers, saying that it is against farmers from SA who want to cross the border and gain from the country's agricultural opportunities.
Zimbabwe's CFU has reportedly urged white South African farmers to agree to a deal to share land with the black majority to avoid suffering the same fate as their Zimbabwean counterparts who were violently evicted from their properties.
A white Zimbabwean farmer who owns a game range in Beitbridge claims he has lost close to $1m in revenue while fighting farm invaders.
White farmers in Zimbabwe are worried about new evictions linked to the country's political battles.